‘सिधा कुरा’का नाममा बार्गेनिंग : ९० करोडको जग्गामा हिस्सा मागे ! - Kantipath.com
‘सिधा कुरा’का नाममा बार्गेनिंग : ९० करोडको जग्गामा हिस्सा मागे !
काठमाडौं। गत साउन १५ गते न्युज २४ टेलिभिजनमा एउटा प्रोमो बज्यो–‘शुक्रपथ बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका सञ्चालकको कालोधन्दा….. बचत कर्ताको पैसामा सञ्चालकको रजाई….प्रतिक्षा गर्नुहोस् ।’
यद्धपी दियोपोस्टले भने उक्त प्रोमो फेला पारेको छ ।
सम्झौतामा रमेश ढकाल नाम गरेका व्यक्तिलाई साक्षी बनाइएको छ । तर, उनी वास्तविक पीडित नभई विचौलिया भएको पाइएको छ । पीडित भनिएका रमेश र सहदेव कक्षपतिको टेलिभिजनका मालिक अनिल जोशीसँग निकट सम्बन्ध रहेको स्रोतको दाबी छ ।
Previous Previous post: सेयर बजार २७ अंकले बढ्यो, ३८ करोडको कारोबार
Next Next post: सिद्धार्थले शेयरधनीहरुलाई २५.२६ प्रतिशत लाभांश दिने